बरंजाका रोकाको रहरलाग्दो किबी खेती – धौलागिरी खबर
बरंजाका रोकाको रहरलाग्दो किबी खेती
धौलागिरी खबर	 २०७७ मंसिर २४, बुधबार २२:३६ गते मा प्रकाशित 1,612 0
बेनी, । म्याग्दीको मंगला गाउँपालिका–४ बरंजाका भबिराज रोकामगर किबी खेतीबाट राम्रो आम्दानी गर्न सफल हुनुभएको छ ।
बि.स २०७४ मा काभ्रेबाट ल्याएर २०० वटा किबीको बिरुवा रोप्नुभएका रोकाले एकै वर्षमा साढे सात लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्नुभएको हो । ४३ वर्षीय रोकाले १५ रोपनी जग्गामा हवार्ड जातको किबी खेती गर्नुभएको छ ।
यस वर्ष काठमाडौ र पोखराबाट आएका ब्यापारीले बारिबाटै ३० क्विन्टल किबी खरिद गरेर लगेका रोकाले बताउनुभयो । ग्रेड अनुसार प्रतिकिलो सरदर २५० रुपैयाँका दरले बिक्री बेचेको उहाँले बताउनुभयो ।
धान, मकै, कोदोको तुलनामा लहरा प्रजातिको किबी खेती गरेर धेरै राम्रो आम्दानी लिन सकिने रोकाको अनुभव छ । बरंजाको दुर्दी देखि बुकेनी जाने सडक छेउमा रोकाको किबी बगैचा छ । किबी खिती गर्न उहाँले छ लाख पचास हजार रुपैयाँ लगानी गर्नुभएको थियो ।
बगैचाको काटछाट र गोडमेलमा आफूहरुले गरेको कामको ज्याला बाहेक वार्षिक ३० हजार रुपैयाँ मात्र खर्च हुने गरेको छ । निलो तुथो र रोककिरा नियन्त्रणका लागि बिषादी किन्न मात्र खर्च हुने गरेको छ । घरमै पालेका गाइभैसीको मल किबी खेतीमा प्रयोग गर्नुभएको छ ।
रोकालाई किबी खेतीमा श्रीमति चित्रकुमारीले पनि साथ दिनुभएको छ । बुधबार रोकाको किबी फर्म निरिक्षणमा पुग्नुभएका कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीका कृषि प्रसार अधिकृत गोबिन्द पाण्डेले फार्म दर्ता गर्न सुझाव दिनुभएको थियो । उहाँको साथमा मंगाला गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख जगत बानिया पनि रोकाको किबी फार्म निरिक्षणमा पुग्नुभएको थियो ।
रोकाको मेहनत, परिश्रम र सफलता अन्य कृषकहरुका लागि पनि प्रेरणादायी भएको कृषि प्रसार अधिकृत पाण्डेको भनाई छ । अनुकुल भुगोल, हावापानी, उच्च बजार मूल्यका कारण म्याग्दीका कृषक पछिल्लो समय व्यवसायिक किबी खेतितर्फ आकर्षित भएका छन् ।
म्याग्दीको राम्चे, बरंजा, दिच्याम, कुहुँ, तोरीपानी, भकिम्ली, रुम, पर्वतको लेकफाँट, बाँसखर्क र शालीजा क्षेत्रमा केही वर्षयता किबी खेति बिस्तार भएको छ । स्वादीलो, धेरै पौष्टिक तत्ब पाईने र स्वस्थ्यकर मानिने किवीको बजारमा माग र खपत बढेको छ । लगाएको तेस्रो वर्षबाट एउटा बोटमा ५० देखि ७० किलोग्रामसम्म फल लाग्ने गर्छ । समुद्री सतहदेखि १ हजार ५०० देखि २ हजार मिटरको उचाइमा किबी खेति गर्न सकिन्छ ।
भिटामिन सि लगायत पौष्टिक तत्व पाइने किबी चिनी रोगका बिरामीहरुका लागि लाभदायक मानिन्छ । पाचन प्रक्रियालाई सहयोग गर्ने किबीबाट जाम र वाइन बनाउन सकिन्छ । अमिलो र गुलीयो स्वाद पाइने किबीलाई नेपालीमा ठेकी फलको रुपमा चिन्ने गरिएको छ । किबी चिनमा विकास भएको फलफूल हो ।
न्युजील्याडले किबीलाई प्रमुख फलफूल बालीको मान्यता दिएको छ । सोयु, ब्रुनो, हेवार्ड, आलीसान, टोमरी, मन्टी जातको किवीको बिरुवाको मूल्य सरकारी दररेट अनुसार प्रतिगोटा रु. एक सय छ । निजी नर्सरीबाट रु. तीन सय सम्ममा बिक्री हुन्छ ।
कृषि ज्ञान केन्द्रले गत वर्ष मोडेल फार्म कार्यक्रम मार्फत एक वटा किबीको फार्म स्थापनाका लागि अनुदान दिएको थियो । यो वर्ष चार वटा किबी फार्म स्थापनाका लागि आवेदन परेको छ । सजिलो र कलामी बिरुवा रोपेको दुई वर्षमै आम्दानी लिन सकिन्छ । प्रति ८ वटा पोथि बिरुवा बराबर एक वटा भाले किबीका बिरुवा लगाउनुपर्छ । लहरा भएर फैलिने किबी एक रोपनीमा १५ वटा सम्म किबीका बिरुवा लगाउन सकिन्छ ।